အကယ်ဒမီပေးပွဲရှိနေတာတောင် Clean up Challenge မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ အေးမြတ်သူ - Cele GabarCele Gabar
ဆယ်လီကမ္ဘာပရိသတ်ကြီးရေ ဒီနေ့ဟာ မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လောကသားတွေရဲ့ တန်ဖိုးအထားရဆုံး အကယ်ဒမီဆု ပေးအပ်ချီးမြှင့်တဲ့ နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် အေးမြတ်သူတစ်ယောက်က တော့ အကယ်ဒမီပေးပွဲရှိနေတာတောင် ပြင်ဆင်ခြယ်သ ပွဲတက်ဖို့ထက် ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ နောက်ဖေးလမ်းကြားက အညစ်အကြေး အမှိုက်သရိုက်တွေနဲ့ မြောင်းပုဒ်တွေကို သယ်ယူရှင်းလင်းတဲ့ နေရာမှာ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါအကြောင်းအရာကို ကိုအရည်ကြို ရဲ့ အင်တာနက် စာမျက်နှာ မှာရေးသားထားပါတယ်။
ကိုအရည်ကြို က “#CleanUpChallenge#ညနေမှာအကယ်ဒမီပေးပွဲရှိပေမဲ့ #မင်းသမီးအေးမြတ်သူလာခဲ့ပါတယ်ကိုအရည်ကြို မင်းသမီး အေးမြတ်သူလာလဲ မလာဘူးနော် ??အရည်ကြို – ဟင် လာတယ်လေသူ Mask အုပ်ထားလို့ ညီတို့ သတိမထားမိတာထင်တယ်ညနေမှာ သူအကယ်ဒမီပေးပွဲ ရှိရဲ့နဲ့ကို ဒီ CleanUpChallenge ကိုသူလာခဲ့တယ်။ညီလေးမတွေ့မိလိုက်ဘူးဆိုရင် ကိုကြို ပုံတွေခနနေ FB မှာတင်ပေးလိုက်မယ်နော်လာရောက်ကူညီပေးပီး၊ အားကြိုးမာန်တက် ယောက်ကျားတွေနဲ့ ရင်ဘောင်တန်းပြီး အလှပြတာမဟုတ်ဘဲ အလုပ်နဲ့ သက်သေပြသွားတဲ့ ညီမလေး အေးမြတ်သူကို CleanUpChallenge မှ လေးစားစွာကျေးဇူးတင် ရှိပါကြောင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်ချစ်ခြင်းများစွာဖြင့်အရည်ကြို
” ဟု ရေးသားထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဆယ်လီကမ္ဘာပရိသတ်ကြီးရေ မမြတ်လေးရဲ့ လေးစားစရာစိတ်ထားအတွက် မှတ်ချက်ကနေ တစ်ခုခြုေ ပာပြခဲ့ကြပါနော် ။
Source – အရည်ကြို
အကယျဒမီပေးပှဲရှိနတောတောငျ Clean up Challenge မှာပါဝငျခဲ့တဲ့ အေးမွတျသူ
ဆယျလီကမ်ဘာပရိသတျကွီးရေ ဒီနဟေ့ာ မွနျမာ့ရုပျရှငျလောကသားတှရေဲ့ တနျဖိုးအထားရဆုံး အကယျဒမီဆု ပေးအပျခြီးမွှငျ့တဲ့ နလေ့ညျးဖွဈပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ အေးမွတျသူတဈယောကျက တော့ အကယျဒမီပေးပှဲရှိနတောတောငျ ပွငျဆငျခွယျသ ပှဲတကျဖို့ထကျ ရနျကုနျမွို့ရဲ့ နောကျဖေးလမျးကွားက အညဈအကွေး အမှိုကျသရိုကျတှနေဲ့ မွောငျးပုဒျတှကေို သယျယူရှငျးလငျးတဲ့ နရောမှာ စတေနာ့ဝနျထမျးအဖွဈပါဝငျခဲ့ပါတယျ။ အဆိုပါအကွောငျးအရာကို ကိုအရညျကွို ရဲ့ အငျတာနကျ စာမကျြနှာ မှာရေးသားထားပါတယျ။
ကိုအရညျကွို က “#CleanUpChallenge#ညနမှောအကယျဒမီပေးပှဲရှိပမေဲ့ #မငျးသမီးအေးမွတျသူလာခဲ့ပါတယျကိုအရညျကွို မငျးသမီး အေးမွတျသူလာလဲ မလာဘူးနျော ??အရညျကွို – ဟငျ လာတယျလသေူ Mask အုပျထားလို့ ညီတို့ သတိမထားမိတာထငျတယျညနမှော သူအကယျဒမီပေးပှဲ ရှိရဲ့နဲ့ကို ဒီ CleanUpChallenge ကိုသူလာခဲ့တယျ။ညီလေးမတှမေိ့လိုကျဘူးဆိုရငျ ကိုကွို ပုံတှခေနနေ FB မှာတငျပေးလိုကျမယျနျောလာရောကျကူညီပေးပီး၊ အားကွိုးမာနျတကျ ယောကျကြားတှနေဲ့ ရငျဘောငျတနျးပွီး အလှပွတာမဟုတျဘဲ အလုပျနဲ့ သကျသပွေသှားတဲ့ ညီမလေး အေးမွတျသူကို CleanUpChallenge မှ လေးစားစှာကြေးဇူးတငျ ရှိပါကွောငျး ဖျောပွအပျပါသညျခဈြခွငျးမြားစှာဖွငျ့အရညျကွို
” ဟု ရေးသားထားတာကိုတှရေ့ပါတယျ။ ဆယျလီကမ်ဘာပရိသတျကွီးရေ မမွတျလေးရဲ့ လေးစားစရာစိတျထားအတှကျ မှတျခကျြကနေ တဈခုခွုေ ပာပွခဲ့ကွပါနျော ။
Source – အရညျကွို
Previous Previous post: (၂၀၁၈)ခုနှစ်ရဲ့ အကယ်ဒမီပေးပွဲကို ချစ်ခင်ပွန်း အဆိုတော် ရွှေထူးနဲ့ စုံတွဲလိုက် တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ ရွှေမှုန်ရတီ
Next Next post: ရွံတတ်၊ အန်တတ်ပေမယ့် Clean up Challange မှာ ထိပ်ဆုံကပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ မုဏ်း
အမေရိကန်နိုင်ငံသား zach king ကိုအားကျပြီး magic video တွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ရွက်ပုန်းသီးပညာရှင် မန္တလေးသားလေး Street King
Published: April 22, 20193:31 pm Updated: 3:36 pm
” အလှတွေပြင်ထားပြီး စောင့်နေတယ်ဆိုတဲ့ နွယ်နွယ်ထွန်း “
Published: April 19, 20195:57 pm Updated: April 20, 20199:37 am